Ny Glacier Perito Moreno mahafinaritra, any Arzantina | Vaovao momba ny dia
Ny Glacier Perito Moreno mahafinaritra, any Arzantina
Mariela Carril | | Arzantina
Ho an'ny maro ity glacier tsara tarehy ity any atsimon'i Arzantina dia iray amin'ireo zava-mahatalanjona eran'izao tontolo izao. Raha tianao ny glaciers sy ny tontolon'ny alpine ny Perito Moreno Glacier miandry anao any Patagonia Arzantinaa amin'ny fotoana rehetra amin'ny taona.
Ny glacier dia ao amin'ny faritanin'i Santa Cruz ary manana 250 kilometatra toradroa ny velarany. Mahafinaritra izy io ary iray amin'ireo andriamby fizahan-tany manandanja indrindra eto amin'ny firenena. Mahatonga mpizahatany an'arivony maro handeha kilometatra maro kilaometatra fotsiny mba hankasitrahana azy io ary antenaina fa hahita ny iray amin'ireo fiatoana be tabataba sy mahafinaritra. Ao anatin'ny Valan-javaboary Los Glaciares izy io ary iray amin'ireo glacier izay misongadina indrindra satria io irery no hita avy amin'ny tany.
1 Mampiavaka ny Glacier Perito Moreno
2 Ahoana ny fomba hahatongavana amin'ny Glacier Perito Moreno
3 Fitsangatsanganana an-tongotra sy mandeha mamakivaky ny Perito Moreno Glacier
4 Soso-kevitra hitsidika ny Glacier Perito Moreno
5 Fitsangantsanganana hafa akaikin'ny Glacier Perito Moreno
Mampiavaka ny Glacier Perito Moreno
Ny haavon'ny glacier dia manodidina ny 74 metatra ary ny ranomandry indray manana halalin'ny 170 metatra. Izy io dia glacier izay mandroso mihoatra ny rano amin'ny reniranon'i Rico amin'ny farihy Argentino ary rehefa mihetsika toy ny hadivory izy dia tafakatra metatra maromaro ny haavon'ny rano. Tonga tany amin'ny tanibe ny ranomandry tamin'ny 1947, nanohina ny tendron'ny saikinosy Magellan ary namono ala lenga. Avy eo dia nisy karazana tohodrano voajanahary natsangana izay nanapaka ny tatatra atsimon'ny farihy, ilay antsoina hoe Brazo Rico.
Nanomboka teo dia avo ny tsindry amin'io fotoana io ary izany no antony namoronana tonelina mihoatra ny 50 metatra izay noforonina tsikelikely mandra-pahafatiny dia nirodana ilay tionelina. Nitranga imbetsaka izany ary tombanana fa isaky ny efa-taona na dimy taona. Ireo mpizahatany izay tsara vintana mahita azy dia afaka mahita ny zava-drehetra 400 metatra miala fotsiny. Haitra.
Ny glacier dia mandroso amin'ny hafainganam-pandeha 4 kilometatra avy eo aloha, izay maneho 700 metatra isan-taona sy roa metatra isan'andro. Ny geologists dia mbola tsy manaiky ny fizotry ny lalàm-panorenany, na amin'ny alàlan'ny accretion, ny fifandanjana na ny fihenan'ny. Na izany na tsy izany, mihintsana ny vainga fotsy mamindra, mihetsika, vaingan-dranomandry amin'ny habe samihafa ary hainy foana ny manao fampisehoana.
Ity glacier ity, miaraka amin'ireo hafa ao amin'ilay faritra, Izy io dia ampahany amin'ny Ranomasina Continental Patagonian izany dia 17 arivo kilometatra ny halavany ary izany izy io dia iray amin'ireo tahirin-drano fisotro lehibe indrindra manerantany. Taorian'ireo faritra glacier an'ny Antarctica sy Greenland dia ny ranomasin'i Arzantina.
Ahoana ny fomba hahatongavana amin'ny Glacier Perito Moreno
Ny glacier dia ao anatin'ny Valan-javaboary Los Glaciares, any amin'ny faritanin'i Santa Cruz. Ny maha-ao Buenos Aires dia tsara indrindra ny mitondra fiaramanidina satria any Arzantina dia tena lavitra ny halavirana. Rehefa tonga any Santa Cruz ianao dia afaka mandray ny Route 11 an'ny Faritany avy any El Calafate mankany amin'ny tanànan'ny Punta Bandera. Fotoana fohy talohan'ny nahatongavany dia misy ny lalana mihodina mankany amin'ny saikinosy Magallanes, izay nanamboarana ireo lalambe mba hijerena ny glacier.
Azo atao ihany koa ny mankany any amin'ny alàlan'ny làlambe Faritany 15 avy any El Calafate. Mitondra antsika hatrany amin'ny National Reserve izay eo akaikin'ny Farihy Roca ary ny antsasaky ny fiantsonana mankany amin'ny Saikinosy Magallanes. 80 kilometatra io ka mila manisa ny dia adiny iray sy sasany ianao.
Fitsangatsanganana an-tongotra sy mandeha mamakivaky ny Perito Moreno Glacier
Betsaka ny masoivoho mpizahatany izay manolotra fitsangantsanganana sy fitsangatsanganana eny ambonin'ny glacier sy ny manodidina azy. Miankina amin'ny karazana mpizahatany anao izany rehetra izany, milamina kokoa, mipetrapetraka kokoa na miasa ianao. Misy sambo fitsangantsanganana izay mitondra anao amin'ny sambo mankamin'ny rindrina fotsy misavoana, izay ahafahanao maheno ny fikapohan'ny ranomandry latsaka ary na amin'ny masoandro na amin'ny rahona manome fampisehoana tsy hay hadinoina.
Ho fanampin'ny fitsangantsanganana an-tsambo izay miainga avy any Puerto Bajos Las Sombras, fitsangatsanganana hafa mamela anao handeha amin'ny crampons mamaky ny hamaroan'ny ranomandry. Betsaka ny mandeha sy mampiasa azy io ka tsy dia an-tongotra ho an'ny rehetra. Tonga amin'ny sambo izy rehefa afaka nivezivezy 15 minitra ary avy teo, niaraka tamin'ny fanampian'ny torolàlana sy ny fitaovana manokana, manomboka ny diany izay hahafahantsika mahafantatra farihy manga, kiakiaka lalina, lava-bato ary fantsakana mangatsiaka. Ity karazana dia an-tongotra ity dia maharitra eo anelanelan'ny efatra sy fito ora, raha misy dia an-tongotra ao anaty ala, ary misy piknik koa.
Ny fitsangatsanganana malaza indrindra amin'ny rehetra, ny fitsangatsanganana reny, azontsika lazaina, dia ny fanofana fiara na fidirana fitsidihana ary avelao i El Calafate. Ity zotra ity dia ahafahana mahafantatra ny zavamaniry amin'ny toerana sy ny endrik'izy ireo, miova sy tsara tarehy arakaraka ny vanim-potoana. Ny teboka voalohany eo amin'ilay zotra dia fantatra amin'ny hoe Ny fiolahana ny sento ary mamela anao hahita ny glacier voahodidin'ny havoana akaiky. Avy eo io lalana io ihany dia mifarana amin'ny tendrony andrefana ny saikinosy Magallanes, manoloana ny dimy kilometatra mahery ny velaran-dranomandry sy ny vavahady mankamin'ny falehan-tongotra malaza.
Ireo zana-tongotra ao amin'ny Perito Moreno Glacier dia namboarina namorona boriborintany telo misy lavarangana sy tohatra manome ny fomba fijery amin'ny fomba fijery samihafa ianao. Raha te hankafy fomba fijery panoramic hafa ianao dia tsy maintsy mifindra mankany amin'ny tavaratra avaratra mandehandeha eny amoron-dranomasina, fa amin'ny alàlan'ny torolàlana ihany no anaovana izany.
Ary ny tahan'ny inona avy amin'ireo fitsangatsanganana glacier ireo? Raha nifanekenao izy ireo tamin'ny alàlan'ny maso ivoho, dia eo anelanelan'ny 450 sy 1500 pesos Arzantina ny vidiny, eo anelanelan'ny 40 sy 150 euro isanisany. Ny dia mamakivaky ny catwalks dia manodidina ny 450 pesos raha ny trekking amin'ny glacier (trekking, Navigation ary zotra an-tongotra miampy fitaterana avy any amin'ny hotely any Calafate) dia mitentina 1470 pesos na iray andro ny fitsangantsanganana mamakivaky ny renirano sy glaciers dia 1550 pesos.
Soso-kevitra hitsidika ny Glacier Perito Moreno
Tsy maintsy mitondra akanjo mafana ianao, mainka raha sahy handeha eo amin'ny glacier isika. Kiraro, solomaso ary satroka ahazoana aina koa tsy maharary. Ary ny sivana amin'ny masoandro satria ny taratry ny ranomandry fotsy dia matanjaka tokoa.
Fitsangantsanganana hafa akaikin'ny Glacier Perito Moreno
Ao anatin'ny Valan-javaboary Los Glaciares dia misy ihany koa ny glacier Upsala izay tsy azon'ny sambo an-tsambo raha tsy izany. Any amin'ny faritra avaratry ny Farihy Argentino izy io ary lehibe kokoa noho ny Perito Moreno. Manana ranomandry be dia be izy ary tombantombana fa ny eo alohany dia tsy tohanan'ny fanambanin'ny renirano fa mitsingevana. Fitsangatsanganana kayak raha hijery azy akaiky ny vidiny manodidina ny 400 euro ary mahafinaritra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » America » Arzantina » Ny Glacier Perito Moreno mahafinaritra, any Arzantina
Zava-misy mahaliana momba an'i Sina: tantara, kolontsaina, jeografia ary zavatra manintona
Ireo trano fandraisam-bahiny 10 tsara indrindra tafiditra ao amin'ny trano rehetra hoy ny TripAdvisor.